Banyere Anyị - Shijiazhuang Yichen Plastic Ft Co., Ltd
YICHEN SOPRTS plastic Ft CO., LTD
Na ezi okwukwe na kacha mma mma, anyị na-aghọ ndị mba ika ndú nke plastic n'ala.
Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Ft Co., Ltd, emi odude ke Shijiazhuang High-tech development mpaghara, bụ a ike mmepụta enterprise, na-etinye onwe ya na-rearching & na-emepe emepe, na-amị, ahịa, wụnye na ọrụ maka ịkwanyere plastic n'ala.
Anyị ụlọ ọrụ a hụrụ na 2006. Ọ na-eto nke State na mkpokọta Nwe Enwe enterprisewho na-kere na 1984, otu n'ime ndị ọsụ ụzọ maka nnyocha & Ịzụlite na-amị ịkwanyere plastic flooring. Anyị nwere onwe anyị ọkachamara onwe ha nnyocha na mmepe otu, na-ekwe nkwa anyị na-edu ndú na Chinese ịkwanyere plastic flooring ụlọ ọrụ na ọtụtụ afọ.
Ná mmalite nke oruru nke Yichen, anyị tumadi-enye anyị onwe nnyocha ma mepụtara ịkwanyere sports usoro flooring maka anyị anụ ụlọ &
mba nkesa na injinịa ụlọ ọrụ, na-nnọọ aha ọma si ahịa anyị. N'otu oge ahụ, anyị na-theinnovation ka a development echiche, na-eme nnyocha na-emepe emepe ọhụrụ ngwaahịa. Na 2014, anyị na-na-ulo oru na usoro nke azụmahịa flooring, gụnyere marble ọka usoro ịkwanyere flooring, UV ụlọ akwụkwọ ọta akara usoro ịkwanyere flooring, ịkwanyere azụmahịa flooring na njupụta akwado etc, na-enye ndị ọzọ elu àgwà na
Anyị gafere akwụkwọ ISO: 9001, ISO14001, BV nke France, BWF na OA wdg Ke adianade do, anyị ghọrọ onye òtù nke Heba ulo E-Commercial na otu onye nke ike n'ezi director enterprise nke Yanzhao Chamber of E-Commercial na 2013 . Hebei Chamber of E-Commercial bụ nke mbụ mbupụ ahia-ulo nke azụmahịa na Hebei n'ógbè.
Anyị Yichen ndị mmadụ na-erube isi enterprise mmụọ nke "Ẹda anyị onwe anyị na otu site ezi obi, nweta anyị ọrụ site n'okwukwe, na-adị ndụ na àgwà, ịzụlite na kwekọrọ." Ma na-"E nwere nanị echiche nke anya-oge, ma ọ dịghị anya-oge ahịa ; E nwere nanị a na-adịghị ike na-eche, ma ọ dịghị na-adịghị ike ahịa "dị ka anyị na ime ihe ụkpụrụ, na-arụ ọrụ ọma, na-enye ndị ọzọ elu mma ngwaahịa na mma ọrụ n'ihi na ndị ọzọ ahịa. Yichen bụ gị ezi nhọrọ ,. ka na-arụ ọrụ ọnụ ma na-ewu mma n'ọdịnihu ọnụ.